Nri 5 iji melite njem eriri afọ | Bezzia
Nri 5 iji melite njem eriri afọ
Nke Torres | 13/09/2021 16:00 | Nri
Inwe ezigbo ụzọ eriri afọ dị mkpa iji nwee ahụ ike. N'ihi na ọ dị mkpa iwepụ nsị n'ahụ ka ihe niile wee rụọ ọrụ nke ọma n'ime anyị. Na afọ ntachi nwere ike ibute ọgbaghara dị iche iche dịka mbufụt nke akwara, nke a kacha mara dị ka hemorrhoid ma ọ bụ fissure anal, n'etiti ndị ọzọ. Maka nke a, ọ dị ezigbo mkpa ịkwado ihe ndị na -emebi ihe site na nsị.
Iji meziwanye ụzọ eriri afọ, ọ dị mkpa ịgbaso nri dị iche iche, nke ziri ezi na nke dị mma. Fiber bụ nri na -enyere aka nke ukwuu, mana ọ bụghị naanị ya, ebe ọ bụ na ndị ọzọ dị ka nri fermented, hydration ma ọ bụ abụba bụ ndị na -amasị njem. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọpụta ka esi eme ka ụzọ eriri afọ gị ka mma kwapụ kwa ụbọchị wee si otú a mee ka ahụike gị ka mma, ị ga -etinyerịrị nri ndị a na nri gị.
1 Olee otú ka mma nsia n'ụzọ
1.1 Mkpụrụ ya
1.2 Agwa griin
1.4 Mmanụ oliv ọzọ
1.5 Mkpụrụ flax na chia iji meziwanye ụzọ eriri afọ
Olee otú ka mma nsia n'ụzọ
Na mgbakwunye na nri, hydration na -ekere oke na nhazi a. Usoro nri nri nwere ọtụtụ ọrụ na otu n'ime ha bụ nhazi feces iji kpochapụ nsị n'ahụ. Dị ka ụdị ndị a, eriri afọ buru ibu na -ewepụ mmiri wee si otú a sie ike. Mgbe ahụ ahụ anaghị eju mmiri nke ọma, stool na -esiwanye ike ma kpọọ nkụ ma ọ na -esiri ike ịgafe.
Enweghị hydration bụ otu n'ime isi ihe kpatara ya afọ ntachi. Mgbe nke a mere, oche ga -afụ ụfụ, ọbara ọgbụgba, ntụpọ gbasara ike, na ahụ mgbakasị ahụ nke afọ ntachi nwere ike ịpụta. Ịụ lita mmiri 2 kwa ụbọchị ga -enyere gị aka imezi ụzọ njem eriri afọ, na mgbakwunye na itinye nri ndị a na nri gị.
Ebe ebumpụta ụwa nke eriri, vitamin na mineral, mkpụrụ osisi bụ nri na -agaghị efu na nri ahụike ọ bụla. Iji meziwanye okporo ụzọ, ihe kacha mma bụ kiwi, plums, oroma na apụl. Karịsịa kiwi bụ nri akwadoro nke ukwuu maka ndị mmadụ na -ata ahụhụ afọ ọsịsa. Mkpụrụ osisi a bara ụba na eriri soluble yana bụrụkwa prebiotic eke. Were 2 kiwi kwa ụtụtụ maka nri ụtụtụ ị ga -enwekwa okporo ụzọ mgbe niile.
Akwụkwọ nri na akwụkwọ nri n'ozuzu ha dị mkpa na nri dị mma, maka na ha bụ nri nwere eriri, vitamin na mineral ndị dị oke mkpa maka arụ ọrụ nke ahụ mmadụ nke ọma. Mana ọ bụrụ na enwere akwụkwọ nri akwadoro ka mma okporo ụzọ, ọ bụ agwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ndị a bụ bara ụba na eriri soluble, nke pụtara na ọ bụ nri maka microbiota eriri afọ.
N'ozuzu, mkpụrụ ọka zuru oke dị mkpa maka ịrụ ọrụ nsia dị mma, mana ọ kachasị ọka maka ọtụtụ uru ya. N'ime ha, achịcha akpọre akpọrọ nwere eriri soluble, nke pụtara na ọ na -eme dị ka prebiotic eke. Ị nwere ike were flakes oat na nri ụtụtụ, na yogọt ma ọ bụ na ude akwụkwọ nri kacha amasị gị.
Amara n'ụwa niile dị ka ọla edo edo, mmanụ olive anyị na -amaghị nwoke bụ otu n'ime nri kacha asọpụrụ. Maka usoro nri nri ọ dị mkpa, ebe ọ na -eme ka fecal bolus na -ete mmanụ na nke a masịrị nchụpụ ya site na ike. N'ezie, a ghaghị iwere mmanụ ahụ oyi na salads ma ọ bụ iji tinye ụtọ na akwụkwọ nri, n'agbata tebụl 4 ruo 6 nke mmanụ olive na -amaghị nwoke na -atụ oyi nke na -atụ oyi kwa ụbọchị ezuola maka ụzọ mgbagharị eriri afọ ziri ezi.
Mkpụrụ flax na chia iji meziwanye ụzọ eriri afọ
A na -ahụta ha dị ka nnukwu nri maka ọtụtụ ahụike ahụike bara uru. N'ime ha bụ ihe onwunwe nke imeziwanye ụzọ eriri afọ. Mgbe mkpụrụ osisi na -agba mmiri, hapụ ihe ọkụkụ a na -akpọ mucilage. Ọ bụ ihe a na -ahụ maka ihicha eriri afọ ma na -akwalite mmegharị afọ.
Na mgbakwunye na itinye nri ndị a na nri gị, yana nri ndị ọzọ siri ezigbo ike na mkpa dị ka mmiri ara ehi, protein anụmanụ na akwụkwọ nri, mkpo ma ọ bụ abụba, ị kwesịrị ịgụnye obere mmega ahụ kwa ụbọchị na usoro gị. Mmega ahụ dị mkpa iji kwalite mmegharị nsia. Na nkenke, mmiri mmiri, nri na mmega ahụ bụ igodo ahụike ahụike nke eriri afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Nri » Nri 5 iji melite njem eriri afọ
Uwe nkịtị, yana jeans na akpụkpọ ụkwụ
Ntutu ntutu anya: Ihe niile ịchọrọ ịma